18 Ka Mid Ah Ciyaaraha Funniest, Nostalgic Dragon Ball Super - Kale
18 Dragon Ball Super Quotes Taas Oo Kaa Qoslin Doonta Kana Dareen Nostalgic
Ilaha muuqaalka leh: wallpapersite.com
Dragon Ball Super ayaa wali socda. Laakiin xigashada illaa iyo hadda waxay ahayd mid qosol badan, shucuur iyo dhiirigelin leh.
Sida aad ka filaneyso magaca 'Dragon Ball franchise'.
Xigasho DB kasta waxay ka timaaddaa astaamaha soo socda:
Hercule (Mr Shaydaan).
18 Dragon Ball Super Quotes Worth Wadaag:
Xigashooyinka Beerus (DB Super)
'Abuurka ka hor ... waa inuu yimaadaa halligaadda!' - Beerus
Wax khadadkaas along
“Hadda waxa kaliya ee haray waa burburka dhulka, laakiin waxaan u maleynayaa inay qasaare u ahaan laheyd in la burburiyo. Cuntada meerahani waa mid aad u macaan. ” - Beerus
Beerus waa sida muuqata nooca majaajillada ah.
“Waxay umuuqataa in Saiyan ay isbadaleen tan iyo markii iigu dambeysay ee aan arko. Waxay noqdeen fulay. ” - Beerus
Sheekada ka dambeysa xigashadan waxay noqon laheyd mid xiiso leh in lagu arko DB Super.
'Qof kasta oo ka xoog badan ilaah wax baabi'iya ma jiro.' - Beerus
Waxaan ahay ilaah qalbi leh, laakiin waxaa jira hal shay oo aanan u dulqaadan karin… dadka aan siinin ixtiraam sax ah dadka kale. - Beerus
Ilaah ah halaag wadnaha…
'Cidna kama wacdinayo caddaaladda weligeed waa nin wanaagsan.' - Beerus
Xigashooyinka Goku (DB Super)
“Malaa’ig baa? Marka Whis waa malaa'ig? Laakiin isagu ma haysto baalal, oo dabadiisuna ma laalaado. ' - Goku
Oraahdan ayaa ah sababta ama waad jeceshahay Goku, ama waad neceb tahay Goku dambi la’aan.
Aniga shaqsiyan, waxaan jecelahay inaan shaqeeyo oo tababaro. ” - Goku
Tani waa runta dhabta ah ee ku saabsan Goku.
'Haddii aan guuleysto, ballanqaad inaadan dhulka dumin doonin.' - Goku
' Foomkaaga cusubi wuxuu ku gubanayaa awood ka badan inta jidhkaagu bixin karo. Waxay ahayd inaad sugto illaa intaad ka baranaysid foomkan oo aad taqaanid sidaad u nidaamiso ka hor intaadan bilaabin dagaallo. ” - Goku
Goku oo la hadlaya Frieza.
Wareegyada Whis (DB Super)
'Hagaag, waxaan la yaabanahay waxa amiirku sameyn lahaa haduu ogyahay, adigu ma oggoshahay burburka meeraha Vegeta bilowgii?' - Whis
Isagoo wada hadlaya la Beerus ee DB Super.
“Waxaad ku guuldareysatay inaad ilaaliso meerahaaga, dabacsanaantaada awgeed. Sida kaliya ee looga badbaadi karo tan waa in Frieza dib loogu celiyo beertiisa ubaxa. ” - Whis
Whis wadahadal lala yeesho Goku.
Xigasho Qabow (DB Super)
Waxaan bilaabaa dagaalada, xaliyaa naftayda, ka dib waxaan ku iibsanayaa dhulalkii dagaalada halakeeyeen qiimo jaban oo waxaan ka dhigayaa dilal ka imid dib u habeyn iyo dib u dhis. Waa qorshe qurux badan. ” - Dhaxan
liiska anime ugu sareeya waqtiga oo dhan
Erayadan waa inay si dhib leh uga yaabiyaan taageerayaasha DB.
Black Goku Quotes (DB Super)
Waxyaabaha waxaan ku eegayaa aragti aad uga sarraysa adiga. Waxaan u fiirsadaa adduunkan, adduunkan, runta wax walba. Waxaanan gartay in bini-aadamka waa in la baabi'iyaa. Wax kasta oo ilaahyadu sameeyeen oo dhan, binu-aadmiga waa guuldaradoodii keliya. Si adduunkan, koonkan, looga dhigo utopia qurux badan, waa inaan meesha ka saaraa aadanaha, bedelkii ilaahyada diida inay qirtaan qaladkooda. ” - Black Goku
Black Goku wuxuu ku wacdiyaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'DB Super arcs'.
Xigashooyinka Vegeta (DB Super)
Intii aan halkaan joogay waqti luminta, sidee ayay u adag tahay tababarka Kakarot. ” - Khudradda
Vegeta waxaa ka go'an inay is-hagaajiso sidii caadiga ahayd! Taasi waa waxa aan ka jeclahay Vegeta.
'Geerida ilaaha dhimashada, tani waxay noqon kartaa daqiiqad lagu faani karo.' - Khudradda
Taasi Saiyan kibir laad in
Xigashooyinka Gowasu (DB Super)
“Xitaa haddii sharku kaa dhigo mid kaa lumiya jidkaaga, dhulkaaga waad sii joogi doontaa oo waxaad sii wadi doontaa raadinta jidka wanaagsan. Raadintaasi miyaanay ahayn waxa caddaaladdu tahay? Sababtaas aawadeed ayaa ilaahyadu binu-aadmiga u siiyeen aqoonta. - Gowasu
Mr Shaydaan (Hercule) Xigasho
Waxaan ku dhaartay in dhulku weligiis nabad ku ahaanayo. Tan iyo markii aan wacadkaas galay, hal hanjabaad dhulka ah lagama samayn. Taasi waa dhammaan mahadsanid xaqiiqda ah in magaceyga lagu yaqaan dhammaan galaxyada oo dhan. ' - Hercule (Mr Shaydaan)
Hercule waa mid ka mid ah raggaas kuwaas oo si farxad leh u xadi doona iftiinkaaga isla markaana sheeganaya inuu isagu yahay.
Sida ceeb la'aan uu yahay, waa inaad qirtaa inuu ka dhigayo Dragon Ball wax yar oo qosol badan.
27+ GREAT Dragon Ball Z T Shirts Dharkaaga
Maxay Tahay Sababta Ay Taageerayaashu U Aaminsan Yihiin In Khudaarta Aabbuhu Aabe Ka Fiican Tahay Goku
30-ka Wadan ee ugu jecel Anime inta badan sanadka 2020
Xiddiga Tennis-ka Blackanese Naomi Osaka ayaa Dhiirrigeliyay Manga Cusub oo ay abuureen Pretty Cure Creators
Xayawaanleyda cusub ee Japan waxaa laga filayaa inay ka dhigaan $ 270 + Bil Bishii Warshadaha Anime
11 Astaamaha Anime Ee U Qaada 'Ahaanshaha Hadal' Heer Cusub Oo Dhan
12 + Fiidiyowyada Mecha Companyal ee Ugu Fiican Si Loogu Siiyo Riix Dheeraad ah
Top 60 + Anime Lagu qiimeeyay Japan (Tokyo Anime Awards Festival 2020)
Maxay Ka Badbaadin Kartaa Warshadaha Anime ee Dhimashada?
21 Ka mid ah Qodobada Anime ee ugu Xuquuqda Badan ee Ku Saabsan Nolosha Taaban doonta Qalbigaaga
Xigashooyinka ugu Wanaagsan ee Haruhi Suzumiya ee Waqtiga oo dhan
waa maxay anime ugu fiican waqtiga oo dhan
waa maxay jeega nolosha anime